दुई सचिवको दोष, प्रेम राई कसरी निर्दोष ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
दुई सचिवको दोष, प्रेम राई कसरी निर्दोष ?
प्रकाशित मिति १० माघ २०७५, बिहीबार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । वाइडबडी खरिदमा ५ अर्ब रुपैयाँ घोटला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले दिइसकेपछि सरकारले गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायीक आयोग गठन गरेको छ । संसदीय समिति भनेको सिंगो संसदको प्रतिनिधि हो । समितिको प्रतिवेदनमाथि छानविन गर्न अर्को आयोग गठन गर्नु संसदीय विशेषाधिकारको विरुद्ध हो ।
संसदको निर्णयविरुद्ध आयोग गठन गर्नु संसदीय सर्वोच्चताको उपहास हो । तर, सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । प्रतिपक्षले नै वाइडबडी भ्रष्टाचारको छानविनको माग गरिसकेपछि सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।
वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय र बैना वापतको पहिलो किस्ता रकम ९ अर्ब रुपैयाँ पठाउन सटही सुविधा दिने निर्णय प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण लिएर वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त ऋणमा सरकार जमानी बसेको थियो । बैना वापतको ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सञ्चय कोषबाट दिंदा कोषका अध्यक्ष हाल गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई थिए । उनले नै नेपाल वायु सेवा निगमलाई सञ्चयकोषबाट रकम दिने निर्णय गरेका थिए ।
तिनै प्रेम राईले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिव हुँदा वाइडबडी खरिद गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए । सार्वजनिक लेखासमितिले सुरुमा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि पछि उन्मुक्ति दिएको थियो । उनी निर्दोष भएकाले उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ ।
तर, उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा उन्मुक्ति दिइएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्त गरी नविन घिमिरेको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहन्छन् । त्यहि भएर उनले राईलाई उन्मुक्ति दिन दबाब दिएका हुन् ।
राईलाई उन्मुक्ति दिइएपनि वर्तमान पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारीलाई भने सर्वजनिक लेखासमितिले निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । दुई सचिवलाई दोषी ठहर गरेको लेखासमितिले राईलाई उन्मुक्ति दिएकोमा आश्चर्य मानिएको छ ।
वाइडबडी प्रकरणको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । त्यसका एक सदस्य नरेन्द्र पाठकले आयोगमा नबस्ने जनाउ दिइसकेका छन् । पछिल्लो पटक वाइडबडी अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन शुरु गरेको छ । चार जना अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आयोगले छानविन शुरु गरेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )
प्रहरीको काम पीडितलाई सताउने, पीडकसँग असुल्ने ?
काठमाडाैं । सत्यम् सेवा सुरक्षणम् नेपाल प्रहरीको मूल मन्त्र हो । तर ललितपुर प्रहरी परिसरमा यो मन्त्रको ठीक विपरीत…
भरतपुरमा गोली चल्यो, प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप
भरतपुर । अटो रिक्सा तथा ट्याम्पोलाई राजमार्गमा गुड्न नदिने भरतपुर महानगरपालिकाको निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुर एवं व्यवसायी…
गौचन हत्याकाण्ड देखी ८८ किलो सुनकाण्डः के अपराध भए २०१७ मा ? यी हुन चर्चित आपराधिक घटना !
काठमाडौ । २०१७ मा पनि अपराध कम भएन । अंग्रेजी क्यालेन्डर अर्थात्…
अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने उज्ज्वल थापाको घोषणा
काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलका उज्ज्वल थापाले पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन् ।
पार्टीको अधिवेशन कात्तिक १ र…
दीपशिखाले किन गरिन कपाल मुण्ड्न ?
काठमाडौ । फिल्म ‘प्रेमलीला’ को छायांकन भइरहेको छ । केही दिन अगाडि ‘जाने क्या हुवा ए’ बोलको हिन्दी गीत पोखरामा…
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त4views